Dhruba Sapkota | Nepali Stories
Dhruba Sapkota – Gopya Suchana
ध्रुव सापकोटा – गोप्य सूचना
मसँग अहिले एक लाख छ । त्यो एक लाख मेरो होइन अर्काको हो । त्यो अर्को व्यक्ति मरिसकेको छ । त्यो रकम पचाउन मसँग तर्कहरू छन् । म भन्नसक्छु, यो देशमा इमानदार मान्छे को छ र मैले हुनुपर्ने । त्यसमाथि यो रकमको मालिकको मृत्यु भइसकेको छ । कुनै लिखत पनि छैन । तर्कभन्दा पनि यसलाई कुतर्क भन्नुपर्ला । मेरो आसय अहिले अर्कै छ । म कुतर्क झिकेर रकम पचाउने कसरत गर्ने पक्षमा छैन । अहिलेसम्म सोझो बाटो हिँडेर आएको छु । अहिले म बाङ्गो बाटो हिँड्न चाहन्न । सोझो बाटो हिँड्दा कतै पुगिँदैन भने पनि मलाई पछुतो हुने छैन ।
त्यो मृतक केही दिन अघि मेरो कोठामा आएको थियो । मलाई आश्चर्य लाग्यो । त्यो मान्छे अर्काको घरमा प्रायः जाँदैन । मान्छेहरू ऊ बसेको ठाउँमा नै जान्छन् । कसैलाई उसको आवश्यकता परेमा बोलाउन पनि सकिन्छ । त्यो मान्छे अर्काको अप्ठ्यारो बु्झ्छ । त्यो मान्छे सहयोगी छ । आनाकानी गर्दैन । उसको त्यो सदाशयताको मान्छेहरूले प्रशंसा नै गरेका छन् । मेरो मामिलामा उल्टो भयो । त्यसले मलाई एक्लोमा भेट्न खोजिरहेको थियो । त्यसका लागि उसले मेरो चियोचर्चो गरेको हुनुपर्छ । कन्सुत्ल्याई भन्नुपर्‍यो ।
-”किन आउनुभयो ?” मैले प्रश्न गरेँ ।
-”तपाइर्ँसँग एकान्तमा कुरा गर्न चाहेको ।” त्यसले भन्यो ।
-‘एकान्त नै चाहिने ?’ मैले प्रश्न गरेँ ।
-”तेस्रो व्यक्तिले हाम्रो कुरा नसुनोस् ।” त्यसले भन्यो ।
कोठामा चिया आइसकेको थियो । चियाले हामीलाई बाधा पुर्‍याएको थिएन । ढोका खुल्ला थियो । मैले उसलाई ढोका लगाउन पर्ने कि नपर्ने सोधेँ । लगाउन पर्ने नै भयो । उसको र मेरोबीच कुनै किसिमको आत्मीय सम्बन्ध छैन । हामी नातेदार पनि होइनौँ, सामान्य सम्बन्ध छ ।
-”मसँग एक लाख छ ।” त्यसले भन्यो ।
-”एक लाख ?” मैले आश्चर्य प्रकट गरेँ ।
-”हो । एक लाख ।” त्यसले भन्यो ।
-”यो त धेरै हो । यो त ठूलो रकम हो ।” मैले भनेँ ।
-”यहाँका मान्छेका लागि त यो के हो र ? मेरालागि भने धेरै ठूलो रकम हो ।” त्यसले भन्यो ।
-”ठीक भन्नुभयो । कसरी पैसा जोगाउनु
भयो ?” मैले प्रश्न गरेँ ।
-”तपाइँलाई थाहा नै छ, म कोठाबाट विरलै निस्कन्छु । मेरो सोख केही पनि छैन । मेरो कोठा सामान्य छ । कोठामा टेलिभिजनसम्म छैन । सानो एउटा रेडियो छ । आफैँ पकाउँछु । आफैँ भाँडा माज्छु । जे काम पनि आफैँ गर्छु ।” त्यसले भन्यो ।
-”त्यो एक लाख कहाँ छ त ?” मेरो प्रश्न थियो ।
-”त्यो एक लाख मसँगै छ ।” त्यसले भन्यो ।
-”मतलब ?” मैले उसको कुरा बुझिनँ ।
-”मेरो बगलीमा नै छ । मेरो साथमा नै छ ।” त्यसले भन्यो ।
-”यत्रो रकम सधैँ बोकिरहने ?” मैले प्रश्न गरेँ ।
-”हजार, हजारका नोट छन् । मेरो भित्री खल्ती ठूलो छ ।” त्यसले भन्यो ।
-”बैङ्कमा किन नराखेको ?” मैले उसलाई सोधेँ ।
-”मेरो स्वभाव भन्ठान्नोस् ।” त्यसले भन्यो ।
-”आफूसँग यतिका पैसा हुँदा तपाइँलाई डर लाग्दैन ?” मैले प्रश्न गरेँ ।
-”लाग्छ । ज्यादै लाग्छ ।” त्यसले भन्यो ।
-”सडकका मगन्तेको बटुकाको पैसा लुट्नेसम्मको हद्मा मान्छे पुगेका छन् । यो क्रूर युगमा यो निर्दयी युगमा हामी बाँचेका छौँ ।” मैले भने ।
-”यो सब कुरा मैले बुझेको छु ।” त्यसले भन्यो ।
-”अनि ?” मैले कुरालाई अघि बढाएँ ।
-”म बूढो भइसकेको छु । एक्लो छु । मेरो कोही पनि छैन । कुनै पनि समयमा मलाई केही पनि हुनसक्छ । त्यस बेलामा तत्काल नै पैसाको आवश्यकता पर्छ ।” उसले भन्यो ।
– यो त कुनै ठूलो कुरा होइन । तपाईंले चेक काटेर भुक्तानी गर्न सक्नु हुन्छ । पैसा नै ज्यान जाने कारण नबनोस् । मेरो त्यो आशय हो । ‘ मैले भने ।
– ‘मसँग पैसा छ भन्ने कुरा गोप्य राख्न चाहन्छु ।’ त्यसले भन्यो ।
मलाई थाहा छ, उसका तर्कहरू फितला छन् । समय र परिस्थिति अनुकूल छैनन् । मलाई तर्कले उसलाई हराउनु छैन । उसका कुरा सुनिरहन्छु ।
– यस्तो गोप्य कुरा मलाई नै किन भन्नु भयो त ?’ मैले प्रश्न गरें ।
-यसको कारण छ । यस विषयमा धेरै दिन विचार गरेँ । मैले तपाईंलाई विश्वास गर्ने निधो गरेँ ।’ उसले भन्यो ।
-”मेरो बारेमा तपाइँको यो किसिमको आस्था रहेछ । त्यो मलाई थाहा थिएन ।” मैले भनेँ ।
-”म मरेँ भने यो रकम तपाइँले फलानोलाई दिनु ।” उसले मलाई भन्यो ।
यो झन्झटिलो काम थियो । जीवनमा सधैँ सजिलो काम गर्न पाइँदैा, फेरि सोचेँ । उसले आफ्नो मृत्युपछि बोलाउनुपर्ने मान्छेको नाम र ठेगाना दिएको थियो । फोन नम्बर पनि दिएको थियो । मैले आफ्नो राय पेस गर्नुअघि नै उसले आत्मविश्वासका साथ मलाई जिम्मेवारी दिएको थियो, मैले अस्वीकार गर्ने मौका नै पाइनँ ।
अझै पनि मलाई लागिरहेको छ, त्यो बूढोमान्छे मेरो घरमा नआएको भए म यो झन्झटमा पर्ने थिइनँ । यो बेग्लै कुरा हो, अहिले त्यतातिर सोच्नु अर्थहीन छ । त्यो जिम्मेवारीबाट उम्कन मैले यतिसम्म भनेँ, काल सोच्नु हुँदैन ।
-”हुनसक्छ, तपाइँभन्दा पहिले मेरो पालो आउँछ ।” मैले भनेँ ।
मेरो कुराले उसलाई असर गरेन । ऊ आफ्नै अडानमा थियो । यसको अन्त्य भने मैले सोचे जस्तो भएन । उसले सोचेको नै भयो ।
बिहानको समय । समयमा नै उठेँ । पाँच बजेको छ, घुम्न गइँन । चिया खान मन लाग्यो श्रीमतीलाई भनेँ । चिया खाएँ । मेरो दराजमा एक लाख थियो । त्यो रकम मैले एउटा कालो ब्यागमा राखेँ । उसको खल्तीको रकम मेरो दराजमा आइसकेको थियो । लाख रुपियाँ राख्ने गरेको खल्ती उसको चिता नजिकैको खोलामा ˆयाँकिएको थियो । त्यो ब्यागसहित म बस स्टपमा गएँ । त्यतिखेर सडकमा मोटरहरू कुद्न थालिसकेका थिए । दैनिक अखबारहरू पसलमा देखिए । मलाई कुनै एउटा अखबार भए पुग्थ्यो । लामो त होइन यात्रा त अवश्य हो । अपरिचित ठाउँ हो । समय कसरी कटाउने ? दुई किसिमका अखबार किनेँ । अखबारमा ध्यान केन्दि्रत हुँदा बस फुत्कने डर थियो । आधा घण्टा बित्यो । बस आयो । पूरै भरिएको । म चढेँ ।
-”यो लामो रुटको बिहानको बस पनि भरिएको ?” मैले बसको ड्राइभरलाई सोधेँ ।
-”तीन दिनपछि मात्र आज यो रुटमा बस चलेकाले ।” ड्राइभरले भन्यो । ड्राइभरनजिकको इन्जिनमाथि चकटी राखिएको थियो । त्यो चकटीमा मान्छेहरू घेरा लागेर बसेका थिए । मलाई ड्राइभरले सहानुभूति देखायो । मान्छेहरूलाई भनेर मेरा लागि त्यही ठाउँमा बस्न सङ्केत गर्‍यो । मेरो हातमा कालो ब्याग थियो । मैले त्यो ब्यागलाई बच्चाझैँ समातेको थिएँ । त्यो मेरो ब्याग चानचुने थिएन । एक लाख बोकेको कालो ब्याग । त्यो कालो ब्यागमा पैसा छ भन्ने कुरा पाकेटमाराले थाहा पाए ब्याग मात्र जाँदैन मेरो ज्यान पनि जानसक्छ । बस्दा पनि म चनाखो बनेको छु । एउटा स्टप आउँछ । सयौँ मान्छेको भीड देखिन्छ ।
-”यतिका मान्छे ? कि यो जुलुस हो ?” ड्राइभरलाई म सोध्छु ।
-यी मान्छेहरू आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न तीन दिनदेखि आतुर छन् ।
आज पनि जान पाइन्छ कि
पाइँदैन ? त्यो किसिमको अन्योलपूर्ण आँखाले हेरिरहेका छन् । ड्राइभरको भनाइ छ ।
-यी सबै मान्छे हाम्रा रुटका नै हुन् ? मेरो प्रश्न छ ।
-यस ठाउँबाट दस ठाउँमा जानका लागि यातायात पाइन्छ ।
यिनीहरू दस ठाउँका मान्छे हुन् । सबै एउटै ठाउँमा मिसिएपछि यो हुल देखिएको हो । ड्राइभरको भनाइ छ ।
-आज सबै स्थानमा बस चलेका छन् ?’ मेरो प्रश्न छ ।
-”हाम्रो रुट त ठीक छ । अरूको रुटको बारेमा बुझ्नै पर्छ ।” ड्राइभर भन्छ ।
म एक दिनको योजना बनाएर आएको छु । मलाई यहाँ पन्ध्र दिन बस्न परेमा के होला ? यस्तै अन्योलको बीचमा म हिँडेको छु । जुनसुकै समयमा जे पनि हुनसक्ने चलनबाट अनभिज्ञ म छैन ।
-”मलाई त यी मान्छेहरूले भारतको कुनै रेल वेको स्टेसनको झझल्को दिएका छन् ।” मैले भनेँ ।
-”मान्छेको चाप हेर्दा त यहाँ पनि रेलको आवश्यकता देखियो ।” ड्राइभर भन्छ ।
-”आवश्यकता छ भनेर कहाँ हुन्छ र ? बनाउने मान्छे पनि चाहियो ।” म भन्छु ।
-”हुन त हो । यो देशमा बसेर हत्या र आतङ्कको कल्पना गर्न सकिन्छ । रेलको कल्पना गर्न सकिँदैन ।” ‘ड्राइभर भन्छ ।
-”हाम्रो त कल्पना पनि नराम्रो मात्र हुन्छ ।” म भन्छु ।
बसमा धूलोको मुस्लो पस्छ । बसमा धुवाँको मुस्लो पस्छ । सडकमा चल्ने यातायातका साधनले उठाएको यो धूलो निरन्तर बसमा आइरहेको छ । अघि त सिट मात्र भरिएको थियो । अहिले त उभिने ठाउँ पनि भरिएर मान्छेहरू बसको छतमा टुक्रुक्क बसेका छन् । सडकका छेउमा पल्टेका बस देखिन्छन् । आगोले डढेका बस देखिन्छन् । हर दिन हुने दुर्घटनाको साक्षी हुन् यी । हर दिन हुने दुर्घटनाका प्रमाण हुन् यी ।
कुनै बाधा, कुनै विरोध र कुनै व्यवधान म बसको अन्तिम बिसौनीमा पुगेको छु । बीचमा सडक बन्द गरेर कुनै बेला जनता जम्मा गरेर भाषण गरिरहेको थियो । ड्राइभरले वैकल्पिक बाटो देखेको रहेछ । सजिलै उम्कियो । बिसौनीमा म उत्रिएको छु । सानो सहरको एउटा बिसौनी । त्यहाँ कुनै किसिमको पूर्वाधार छैन । बसहरू लाइनमा छन् । त्यही हो । पिसाब फेर्न ठाउँ खोज्छु । कतै छैन । घरबाट एक कप चिया खाएर निस्केको थिएँ । चियाको भन्दा पनि भोक नै लागेको छ । खाना खाने त्यस्तो ढङ्गको ठाउँ देख्दिन । चिया पसलमा चना, सेल, आलु तारेको छ । म बिस्कुट र चिया खान्छु । चिया पसलको सामुन्नेमा लहरै फलफूल पसल देखियो । म स्याउ किन्छु । म केरा किन्छु । मेरो गन्तव्यमा पुग्न अझै अर्को एउटा बस चढ्नुपर्ने थियो । यही बसपार्कको पूर्वतिर थियो बस । त्यहाँ बस एउटा छ । त्यो बसमा एउटा मान्छे छ । त्योसँग म कुरा गर्छु । एक घण्टापछि मात्र जाने कुरा थाहा पाउँछु । त्यो सानो सहरमा घुमेर समय बिताउन सकिन्थ्यो । त्यसका लागि मसँग समय थिएन । म बसमा नै बस्छु । बिहान किनेका अखबार पढ्न थाल्छु । राम्रा खबर कम छन् । नराम्रा नै बढी छन् । जे छन् त्यही पढ्छु ।
बस समयमा नै चल्यो । मान्छेहरूको भीड थिएन । सिटहरू नै खाली थिए । मोटरको बाटो साँघुरो थियो । उकालो ठाडो नै थियो । त्यसमाथि घुमेर जाने । सडकका दायाँबायाँ सुन्तलाका बोटहरू थिए । त्यहाँ सुन्तला फलेका थिएनन् । भर्खरै फूल लागेका । ती सुन्तलाको बोटसँगैको खाली भागमा किसानहरू मकै रोप्न लागेका थिए । महिला र पुरुष दुवै एकसाथ संलग्न थिए । सडकको छेउको एउटा छाप्रोमा एउटा वृद्ध पुरुष टुलुटुलु हेरिरहेको थियो । उसका दिनहरू यसरी हेरेर नै बितेका थिए । आफ्नो त्यो छाप्रोमा त्यसले जीवन बिताएको थियो । ऊ अब मृत्यु पर्खेर बसेको देखिन्थ्यो । ऊ स्वयं भने के पर्खेको छ ? उसलाई नै थाहा छैन ।
एउटा स्कुलको सामुन्नेमा बस रोकियो । म त्यही नै उत्रिएँ । स्कुलको छेउमा एउटा बाटो थियो । त्यो बाटोमा म नाक थुनेर हिँडे । मानव विष्टा कुल्चने भय थियो । म होसियारीपूर्वक आफ्ना पाइला सारिरहेको थिएँ । एउटा पुल देखियो । पुलमुनि खोला थियो । खोलामा पानी बगेको थियो । पानी कञ्चन थियो खोलाका तलका ढुङ्गाहरू देखिएको । माछाहरू देखिए । पुलमा उभिएर म हेरिरहेको थिएँ । निर्मल पानीको बहाव हेरिरहेको थिएँ । यो हेरेर समय बिताउन म आएको थिइनँ । मेरो हातमा एउटा कालो ब्याग थियो । त्यसको तह लगाउनु थियो । पुलको दुवैतिर खेत नै खेत देखिए । ती खेतमा किसानहरू आलु खनिरहेका थिए । यही खेतको बीचमा उसको घर थियो । म तिनीहरूको घरमा पुग्दा दिन आधा भइसकेको थियो ।
-”तपाइँहरू त तीन जना हुनुहुँदोरहेछ ।” मैले भनेँ ।
-”हुन त हामी पाँच जना हौँ ।” छोराले भन्यो ।
-”अरू दुई जना खोइ त ?” मेरो प्रश्न थियो ।
-‘ एउटाको मृत्यु भइसकेको छ । एउटा भने अरबमा छ ।” छोराले भन्यो ।
-”त्यो अरबमा काम गर्ने भाइलाई खबर पुग्यो त ?” मैले सोधँें ।
-त्यसलाई अहिले खबर गरिएको छैन । त्यो गएको धेरै भएको छैन ।
”त्यसले जाँदा लिएको रिन अझै तिर्न सकिएको छैन । यति कामको लागि त्यसलाई बोलाउन ठीक लागेन । एघारौँ दिनमा फोन गर्ने । त्यही बेलामा जानकारी दिने । त्यसो हुँदा उसले त्यहीँ बार्छ । दुई दिनमा काम सक्छ । उसले काम पनि धेरै दिन छोड्न पर्दैन ।” छोराले भन्यो ।
-”यो त एउटा परम्परा धान्ने न हो ?” अर्को छोरा थप्छ ।
-उहाँले आफ्ना छोराहरूको कुरा कहिल्यै पनि गर्नुभएन । छोराहरू छन्सम्म पनि भन्नुभएन । हामीले उहाँलाई एक्लो नै ठान्यौँँँ । हामीले उहाँलाई एक्लो नै देख्यौँ । मैले भनेँ ।
-”उहाँ कसरी बस्नुहुन्थ्यो त्यो कुरा हामीलाई कहिल्यै थाहा भएन ।” छोराले भन्यो ।
-”उहाँ त एउटा सानो कोठामा बस्नुहुन्थ्यो । त्यही कोठामा सुत्ने र खाने गर्नुहुन्थ्यो । उहाँ सधैँ आफैँ बनाएर खाने गर्नुहुन्थ्यो ।” मैले भनेँ ।
-”उहाँको त्यो रूप हामीले देख्न नै पाएनौँ ।” छोराले भन्यो ।
-”उहाँको व्यक्तिगत जीवनको बारेमा मैले चासो दिइनँ ।” मैले भनेँ ।
-”उहाँ के भाडामा बस्ने हो ?” छोराले सोध्यो ।
-”भाडामा हैन ।” मैले भनेँ ।
-”सित्तै ?” छोराको प्रश्न थियो ।
-”हो । घरको ढोकामा नै एउटा पाले घर थियो । त्यही घरमा उहाँ बस्नुहुन्थ्यो ।” मैले भनेँ ।
-”त्यो घरको मालिक तपाइँ हो ?” छोराले सोध्यो ।
-”म हैन । म त छिमेकमा बस्ने मान्छे ।” मैले भनेँ ।
-”त्यो घरको मालिक को हो त ?” छोराको प्रश्न थियो ।
-”त्यो घरको मालिक अमेरिकामा छन् । त्यो घरको भाडा उठाउने र रेखदेख गर्ने जिम्मा उहाँले नै लिनुभएको थियो ।” मैले भनेँ ।
तिनीहरूको बाबु बेपत्ता भएको दस वर्ष बितिसकेको थियो । उनी बेपत्ता भएको समय र अहिलेको समयमा धेरै अन्तर आइसकेको छ । त्यतिखेर छोराहरू एक किसिमको बेसहारा नै थिए । त्यतिखेर यो गाउँका युवाहरू प्रायजसो कोलकता जान्थे । केही वर्ष बिताउथे । र्फकंदा मलेरियासहित आउँथे । एड्ससहित आउँथे । खुट्टा काटिएर आउँथे । पैसा कमाएर ल्याउनेको भने इज्जत नै अर्कै हुन्थ्यो । त्यस्ता मान्छेको विशेष सम्मान हुन्थ्यो । त्यो रकमले ऊ केही जग्गा जोड्न सफल हुन्थ्यो । तिनीहरू आफ्नो बाबु कोलकता जाने कुरा कल्पना पनि गर्न सक्तैनन् । तिनीहरूलाई थाहा छ, वृद्ध मान्छेलाई कसैले पनि काममा लगाउँदैन ।
-”के रोगले उनी बिते ?” छोराको प्रश्न छ ।
-”त्यो त मलाई थाहा भएन ।” मैले भनेँ ।
-”उनले आफ्नो जीवन, आफ्नो व्यक्तिगत जीवन गोप्य राखेजस्तै रोग पनि गोप्य राखे जस्तो छ ।” छोराले भन्यो ।
-”उहाँ खाटमा नै मृत अवस्थामा देखिनुभयो ।” मैले भनेँ ।
-के उहाँ निद्रामा नै चीर निद्रामा पुग्नुभएको रहेछ ।” छोराले सोध्यो ।
-”ओछ्यान नजिक एउटा कचौरामा अलिकति खोले बाँकी थियो, भाँडोमा खोले थियो । अलिकति खोले खाएपछि उहाँलाई केही भएको हुनुपर्छ ।” मैले भनेँ ।
एउटी महिला ढोकामा उभिएर हाम्रो कुरा सुनिरहेकी थिई । त्यसका आँखा नेसनल जोग्राफीमा छापिएको एक अफगान महिलाको आँखासँग मिल्थ्यो । उदास र रहस्यमय । निराश र सहस्यमय । फरक के थियो भने ती महिला गृहयुद्धमा फसेर विध्वंसबाट उम्कन नसकेका परिवारको वेदना आँखाबाट व्यक्त गरिरहेकी थिइन् । यिनीसँग त्यस्तो वेदना के छ ? तिनको मैलो कपाल, दुब्लो शरीर र थोत्रो चोलो फरियाले केही कुरा त बताएका थिए ।
-”यिनी को हुन् ?” म प्रश्न गर्छु ।
-”यो हाम्री कान्छी बहिनी ।” छोरा भन्छ ।
-”तपाइर्ँको परिवारमा एउटी मात्र बहिनी ?” मेरो प्रश्न छ ।
-”हो ।” छोरा भन्छ ।
-”यिनी के गर्छिन् त ?” मेरो जिज्ञासा छ ।
-”यसको त बिहे भइसकेको छ ।” छोरा भन्छ ।
-”यिनको घर कहाँ छ त ?” मेरो जिज्ञासा छ ।
-”पाटीमा बस्छु ।” छोरी आफैँ भन्छे ।
-बिहे भएको मान्छे पाटीमा ? मलाई अनौठो लाग्छ ।
-”लोग्नेले धोका दिएपछि के गर्ने त ?” छोरी भन्छे ।
-धोका ? कस्तो ?’ मेरो जिज्ञासा अझै शान्त भएको छैन ।
-उसले अर्की श्रीमती ल्यायो । मलाई त्यही घरमा टाँसिएर बस्न मन लागेन ।
-”तिम्रा बच्चाहरू छन् ?” मेरो प्रश्न छ ।
-”दुइटा छन् ।” छोरी भन्छे ।
-”दुइटा बच्चासहित पाटीमा बस्दा अप्ठ्यारो हु्ँदैन ?” म सोध्छु ।
-”काम गरेर खाने हो ।” छोरी भन्छे ।
-”त्यो पाटी कसले बनाइदियो त ?’ मेरो प्रश्न छ ।
-”त्यो सार्वजनिक पाटी हो । खेतको बीचमा छ । मान्छेहरूले खेतमा काम गर्दा थाकेको बेलामा र पानी आएको समयमा ओत लाग्ने गरेको पाटी हो ।” तिनी भन्छिन् ।
-”यो पाटीमा असुरक्षा हुँदैन ?” म भन्छु । म अब उनीसँग धेरै कुरा गर्न चाहन्नथेँ । कुरा बढ्दै जाँदा दुःखको पोको मात्र खुल्छ । मलाई लाग्यो यो एक लाख यिनले पाए के गर्थिन् होला ? पहिलो त तिनी यो अपमानबाट बच्न आफ्नो नाउँमा अलिकति जग्गा किन्ने छिन् । त्यहाँ सानो छाप्रो हाल्ने छिन् । सगर्व भन्नेछिन्, म आफ्नै घरमा बस्छु । एउटा गाई किन्नेछिन् । दूध बेचेर बच्चाहरू पढाउनेछिन् । तिनको जीवनमा यो एक लाखले आमूल परिवर्तन ल्याउने थियो । जेठो छोराको कुरा अर्कै छ । असमयमा नै जिम्मेवारी उसले लिन परेको छ । बाबु छैनन् । आमा छैनन् । स-साना भाइबैनी छन् । तिनीहरू भोकाउँछन् । बारीको अन्नले खान पुग्दैन । छिमेकका बच्चाहरू स्कुल गएका छन् । तिनीहरूलाई स्कुल पढाउन पर्‍यो । तिनीहरूलाई कापी चाहियो । किताब चाहियो । स्कुलका लागि शुल्क तिर्न नै पर्‍यो । तिनीहरू बिरामी पर्छन् । ओखती गर्न नै पर्‍यो । यस्तोमा रिनबाट डराउने कुरा छैन । यस्तोमा ब्याजबाट डराउने कुरा छैन । अहिलेसम्म जीवनलाई गुडाएर यहाँसम्म आइपुगेकोमा उसलाई अनौठो लाग्छ । सपनामा हिडेँजस्तो कहाँलीलाग्दो यो एक लाख यसका लागि ठूलो हुनेछ । गहिरो घाउमा खाटा बसे जस्तो ।
त्यो उदास आँखाकी महिलाले मलाई चिया दिएकी छे । म त्यहाँ बसेको एक घण्टा भएको छ । तिनीहरू सेता किरियापुत्रीका लुगामा अलग्गै बसेका छन् । तेह्र दिनसम्म यिनीहरू यसरी नै बस्नेछन् । म त्यो घरबाट पल्लो डाँडामा हेर्छु । त्यहाँको सडकबाट प्रत्येक घण्टामा बस सेवा चालु छ । प्रति घण्टामा बस चल्छ । समय मेरालागि धेरै छैन ।
-तपाईँहरूको पिताजीले यो रकम दिनु भनेको स्कुल त्यही हो ?’ म एउटा स्कुललाई सङ्केत गर्छु ।
-”उहाँले खास कुरा के भन्नुभएको थियो ?” छोराको प्रश्न छ ।
-मेरो मृत्यु संस्कारमा लाग्ने रकम यसैबाट खर्च गर्ने । त्यसका लागि कसैको एक पैसा पनि नपरोस् । त्यसबाट बचेको रकम सबै नै स्कुललाई दिने । मैले मृतकको इच्छा तिनीहरूको सामुन्नेमा अक्षरस राखेँ ।
तिनीहरू मेरा कुरा सुनिरहेका थिए । तिनीहरूले मेरा कुरामा केही नौलो कुरा भेटेका थिएनन् ।
-”उहाँले यो प्रस्ताव राख्दा तपाईँले केही भन्नुभएन ?” छोराले प्रश्न गर्‍यो ।
-”प्रस्ताव गजबको थियो । उपकारी प्रस्ताव थियो । यसमा खण्डन गर्ने ठाउँ थिएन ।” मैले भनेँ ।
-उहाँको मनमा के थियो कुन्नि ?’ छोरा मेरा कुरालाई अझै पचाउँन सकिरहेका थिएनन् । उसको प्रश्नबाट मैले यो किसिमको अनुभव गरेँ ।
-”तपाइँहरूको बीचमा केही खटपट
थियो ?” म प्रश्न गर्छु ।
-”मरेको मान्छेको बारेमा टीका-टिप्पणी गर्न चाहन्नौँ ।” छोराले भन्यो ।
-”ठीक हो । मरेको मान्छेको गुण बयान गर्नु भन्छन् ।” मैले भनेँ ।
-”हामीले पनि यही कुरा सुनेका छौँ ।” छोराले भन्यो ।
-यो दस वर्षसम्म उहाँसँग तपाइर्ँहरूको सम्पर्क भएन ?” म प्रश्न गर्छु ।
-”उहाँले पनि गर्नुभएन । हामीले पनि प्रयत्न गरेनौँ ।” छोरा भन्छ ।
कुराको चुरो यहीँ कतै अल्झेको थियो । मैले कुरा तन्काउन चाहिनँ । तन्काउन आवश्यक भने थियो । मेरो यो बोझ हलुका गर्ने समय आइसकेको थियो । छोराछोरीको आवश्यकताका बारेमा उनी अनभिज्ञ थिएनन् । छोराछोरीलाई उनले पूरै बेवास्ता गरेका थिए । पुख्र्यौली घरको नजिकको स्कुललाई महत्त्व दिएका थिए । मैले सोचेको थिएँ, काजकिरियाका लागि रकम छुट्याएर उनीहरूलाई दिन्छु । बाँकी रकम उनकै इच्छाबमोजिम स्कुललाई दिन्छु ।
-”यो रकम यही हो लिनोस् । स्कुलमा अब म जान्नँ । यो काम अब तपाइर्ँको जिम्मामा छ ।” मैले भनेँ । यहीँ आएपछि नै मेरो विचारमा आएको परिवर्तनलाई कार्यान्वयन गरें ।
तिनीहरूले प्रतिक्रिया जनाएनन् । सम्बन्धको यो पाटो अध्ययन गर्न लायक थियो । यो त सुरुआत मात्र थियो ।
Posted in Dhruba Sapkota
Tagged Dhruba Sapkota - Gopya Suchana Dhruba Sapkota's Nepali Story Gopya Suchana Literary work of Nepali Story Writer Dhruba Sapkota Literatures of Nepali Story Writer Dhruba Sapkota Nepali Author Dhruba Sapkota Nepali Katha Nepali Katha Gopya Suchana by Dhruba Sapkota Nepali Kathakar Nepali Kathakar Dhruba Sapkota Nepali Rachanakar Kathakar Dhruba Sapkota Nepali Sahitya Nepali Sahityakar Nepali Stories Nepali Stories By Dhruba Sapkota Nepali Stories Collection Nepali Stories Collection Of Dhruba Sapkota Nepali Story Nepali Story Blog Nepali Story Gopya Suchana by Dhruba Sapkota Nepali Story Website Nepali Story Writer Nepali Story Writer Dhruba Sapkota Sahityakar Dhruba Sapkota Ka Nepali Katha Haru